I-Bd & Breakfast "E-Orchard" - I-Airbnb
I-Bd & Breakfast "E-Orchard"
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Feb 12.
I-B & B ibekwe ngemuva kwendlu yethu e-de Lingedijk e-Tricht, cishe amamitha angu-70 ukusuka emfuleni i-de Linge phakathi ne-Betuwe. Eduze kwe-B & B uzothola amadolobhana amancane namadolobhana afana ne-Geldermalsen, i-Leerdam, i-Buren, i-Culemborg ne-Tiel kanye nemifula: i-Korne, i-Lek ne-Waal.
Unokufinyelela kuthala eliyimfihlo, unomnyango ohlukile, indawo yokuhlala / igumbi lokuhlala elinekhishi, igumbi lokugezela langasese kanye negumbi lokulala. Lapho ufika uzokwamukelwa ngenkomishi yetiye noma ikhofi.
Ukudla kwasekuseni kubekwa ngomumo yi-hostess namaqanda, i-ham, ushizi, okusanhlamvu, itiye, ikhofi, ubisi, ijusi lewolintshi, izithelo. Ngesicelo sikwenzela ukudla kwasemini .
Ungathanda ukuba ne-massage yezone ye-reflex yonyawo ephumule ngemva kokuhamba ngezinyawo kunokuba umsingathi ekunikeza lokhu. (€ 20 pp).
Kusihlwa ungasebenzisa i-sauna kanye / noma isihlalo sokubhucunga endaweni engaphansi yendlu ( max. 3 amahora at € 25 ).
Unomnyango ohlukile we-B&B yethu futhi uyakwazi ukufinyelela ithala eliyimfihlo
ubusuku obungu-7 e- Tricht
4.48 · 47 okushiwo abanye
Eduze kwe-B&B yethu kunezinhlelo zamabhayisikili nokuhamba ngezinyawo ezihlanganisa i-Appeldijk ebabazekayo eya e-lordship de Mariënwaerdt okuhamba ngezinyawo noma ngebhayisikili ibanga nje elifushane. Idolobha lase-Orange elingumlando i-Buren kulula ukulifinyelela ngebhayisikili futhi kuwufanele ukuvakashelwa.
Ukuhamba ngomkhumbi nge-Linge kusuka e-Geldermalsen noma e-Leerdam kukunikeza umbono wokuma kwezwe kusuka emanzini
Ngaphandle kwalapho sesivele sikhulunyiwe sihlala sitholakala uma kunemibuzo